अर्थ संसार: 3/1/13 - 4/1/13
सहकारी बजारको योजना कागजमा मात्रै
काठमाडौं, १४ चैत - सरकारले आफैंले घोषणाअनुरूप जग्गा नदिँदा काठमाडौंभित्र कृषि सहकारी बजार खोल्ने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष ०६८÷०६९ को बजेटमा कृषिथोक बजार व्यवस्थाका लागि साना किसान सहकारी संघलाई काठमाडौं उपत्यकामा उपयुक्त जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । तर, उक्त घोषणबमोजिम सरकारले हालसम्म जग्गा नदिएकाले बजारको योजनाअलपत्र परेको सहकारीकर्मीले बताएका छन् । घोषणा भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
सरकारी घोषणालगतै कृषि सहकारी संघले बजार सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव विभिन्न निकायमा घुम्दै हाल भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ ।
संघले ललितपुर सुन्दरीघाटस्थित सरकारी जग्गा माग गरेको थियो । उक्त स्थानमा रहेको ५ सय ८५ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गाको भोगाधिकार दिन संघले प्रस्ताव गरेको थियो । तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पेस गरिएको उक्त प्रस्ताव अर्थ हुँदै स्थानीय विकास, भौतिक योजना र हाल भूमिसुधार मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सरकार परिवर्तन भएसँगै पुरानो सरकारले गरेको राम्रा निर्णयलाई पनि सहयोग नगर्ने राजनीतिक परिपाटीका कारण सहकारी बजार नखुलेको बताए । “राम्रो कार्यक्रम भए पनि अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई निरन्तरता नदिने हाम्रो संस्कार छ,” उनले भने ।
काठमाडौं उपत्यकामा तरकारीको मागपूर्ति गर्नलाई कालीमाटी बजार सानो भएकाले अर्को बजार आवश्यक रहेको अधिकारीको भनाइ छ । सहकारी बजार खुल्न सकेमानिजी क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य भई उपभोक्ताले सरल मूल्यमा खाद्य सामग्री पाउने र कृषकले उपयुक्त मूल्य पाउने उनले दाबी गरे ।
“सहकारी बजारले निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोड्दै बिचौलिया र कालोबजारीलाई कम गर्छ,” अधिकारीले दाबी गरे ।
कृषिसहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठकले देशभरका सहकारीद्वारा उत्पादित वस्तुहरूको बिक्रीका लागि सहकारी बजार आवश्यक रहेको बताए । तर, व्यापारीको पछि लागेर जग्गा दिनका लागि सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए ।
सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराउँदा कृषिबजार निर्माण गरिदिने जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगसमेत फिर्ता हुन सक्ने बताइएको छ । सहकारी बजारका लागि भवन निर्माणमा सहयोग गर्ने जाइकाले घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले कृषि सहकारी संघलाई जग्गादिने घोषणा गर्ने बित्तिकै सहकारीमै विवाद सुरु भयो । कृषि संघबाहेक अन्य नौवटा कृषिजन्य केन्द्रीय संघहरूले सहकारी बजार सञ्चालनको जिम्मा कृषिजन्य संघहरूलाई संयुक्त रूपमा जग्गा दिनपर्ने माग गरे ।
कृषिक्षेत्रका उपभोक्ता, तरकारी तथा फलफूल, दुग्ध, मौरीपालन, उखु, चिया, कफी, जुनार र जडिबुटीका केन्द्रीय संघहरूले संयुक्त भेला गरी राष्ट्रिय कृषि सहकारी सञ्जालमार्फत सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको जग्गा कृषिजन्य सबै सहकारीलाई दिनुपर्ने माग गर्दै छुट्टै प्रस्ताव पेस गरे । जग्गाका लागि दुइटा प्रस्ताव परेपछि सरकारसमेत ढिलाइ गर्ने बाटो पायो ।
तरकारी तथा फलफूल केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष विनोद पराजुलीले भने कृषि संघले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । “कृषि संघ हामीलाई बेवास्ता गरी अघि बढ्न थालेकाले विवाद बढेको हो ।” आफूहरूले कृषि संघलाई समेत समेटेर संयुक्त प्रस्ताव पठाउन खोजे पनि सम्भव नभएको उनले बताए ।
पराजुलीका अनुसार आफूहरूले जग्गामागेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा संघसंस्थालाई नदिन निर्देशन जारी गरेकाले सहकारीहरूले भाडामा उपलब्ध गराउन माग गरेको थिए । तर, सरकारी जग्गा भाडामा दिनेबारे कुनै नीतिगत व्यवस्था नभएकाले त्यसका लागि भूमिसुधार मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
उपत्यकामा हाल दैनिक १ हजार टन तरकारी खपत हुने गरेको अनुमान छ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत तरकारी भारतबाट आउछ भने बाँकी धादिङ, काभ्रे, भक्तपुर, चितवनबाट आपूर्ति हुने गरेको छ । यसैगरी ६÷७ सय टन कालीमाटी फलफूलतथा तरकारी थोक बजारबाट र बाँकी अन्य साना बजारबाट आपूर्ति हुने गरेको छ ।
सहकारीको बजार नहुँदा धादिङ, काभ्रे, भक्तपुर, चितवनलगायतका जिल्लामा कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनले उचित मूल्य नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । कृषकले पाएको भन्दा धेरै गुणा बढी उपभोक्ताले तिर्नु परिरहेको छ ।
सहकारी बजारको व्यवस्थाभएमा कृषक र कृषि सहकारीको सीधै बजारसम्म पहुँच हुने भएकाले बिचौलिया र कालोबजारीको अन्त्य भई उपभोक्ताले अहिलेभन्दा सस्तोमा दैनिक उपभोग्य सामान पाउने सहकारीकर्मीहरू दाबी गर्छन् ।
“देशभरका उत्पादन सहकारीले बजार नपाएको हामीलाई गुनासो गरिरहेका छन्,” तरकारी फलफुल सहकारीकाअध्यक्ष पराजुलीले भने, “सहकारीको बजारसम्म पहुँच बनाउनसके कालोबजारी अन्त्यभई उपभोक्ताले सरल मूल्यमा सामान पाउँछन् ।”
Posted by Yadav Humagain at 8:11 PM
सहकारीले सहकारीको निक्षेप राख्न नपाउने
काठमाडौं, १० चैत - सहकारी संस्थाले अर्को सहकारीमा निक्षेप राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न एक सरकारी समितिले सुझाव दिएको छ । ठूला सहकारीले उच्च ब्याजदरको प्रलोभन देखाई साना संस्थाबाट रकम लिने र उक्त रकम जोखीमपूर्ण रूपमा लगानी गरेको पाइएकाले यसलाई बन्दजे लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
यो सुझाव कार्यान्वयन भएमा सहकारीले केन्द्रीय सहकारी संघ, सहकारी बैंकका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र निक्षेप राख्नुपर्नेछ ।
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले केही ठूला सहकारीले सहकारीहरूको पनि बैंकका रूपमा समेत काम गरेकाले यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औल्याएको हो । फागुन दोस्रो साता अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारीले सदस्यबीच मात्र कारोबार गर्न पाउने भएकाले अन्य सहकारीमा निक्षेप राख्नु गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ ।
“एउटै समूहले धेरैवटा सहकारी सञ्चालन गरी निक्षेपको दुरुपयोग गरेका छन्,” समितिका एक सदस्यले भने, “यो प्रवृत्तीलाई नियन्त्रण गर्न सहकारीले सहकारीमै निक्षेप राख्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिइएको हो ।” यो व्यवस्था लागू भएपछि सहकारी बैंक र केन्द्रीय संघहरूको समेत कारोबार भन्ने उनले बताए ।
हाल केही व्यापारिक समुहले धेरै वटा सहकारी सञ्चालन गरी त्यसबाट संकलित निक्षेप घरजग्गा, हाउजिङमा लगानी गर्दै आएका छन् । त्यसरी सञ्चालित एउटा संस्थामा समस्या आउँदा अन्य संस्थासमेत अफ्ठ्यारोमा पर्ने गरेका छन् ।
सहकारीलाई पारिवारिक कारोबार बनाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो । प्रतिवेदनमा सहकारीले असुरक्षित र जोखिमपूर्ण रूपमा लगानी गरेको औंल्याउँदै अनुगमन दायरा बढाउन सुझाव दिइएको छ । बिना धितो वा कमसल धितोमा लगानी गर्ने, अनुत्पादनक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, सञ्चालककै लगानी रहेको कम्पनीमा लगानी गर्ने, सञ्चालकहरूले नै नक्कली ऋणी बनाएर ऋण लिनेलगायतका कारोबार गरिरहेको औंल्याइएको छ ।
यस्तै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने अधिकांश सहकारीले दर्ता गर्दा तोकिएको क्षेत्रबाहिर र गैरसदस्यसँग कारोबार गर्ने गरेको समेत भेटिएको छ । यसैगरी सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड–२०६८ ले निषेध गरेका क्षेत्रहरू लामो अवधिको मुद्दती निक्षेप लिने, ओभरड्राफ्ट कर्जा प्रवाह गर्ने, चल्ती खाता सञ्चालन गर्ने, सुनचाँदी धितोमा कारोबारलगायका त्रुटी पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी समितिले सहकारीको दर्ता कडाइ गर्न, अनुगमनको दायरा बढाउन, सहकारीमा संस्थागत सुसान कायम गर्नका लागि विभिन्न सुझाव दिएको छ ।
Posted by Yadav Humagain at 8:05 PM
कालोसूचीमा पर्ने सञ्चालक बन्न नपाउने
काठमाडौं, ६ मंगलबार - बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई सहकारीको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारबाही गरेका व्यक्ति सहकारीमा लागेर दुरुपयोग गरेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको हो ।
पाँच सदस्यीय समितिमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शनप्रसाद ढकाल, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने, राष्ट्रिय सहकारी संघका उपाध्यक्ष विजयराज घिमिरे र राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक चेतप्रसाद उपे्रती सदस्य रहेका थिए ।
“समस्यामा परेका धेरै सहकारीको अध्ययन गर्न ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारबाही गरेका व्यक्ति थिए” समितिका एक सदस्यले भने, “त्यसैले कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई सञ्चालक हुन सिफारिस गरिएको हो ।”
समितिले वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायमध्ये कुनै निकायले कारबाही गरेको व्यक्ति सहकारीको सेयर सदस्यसमेत हुने नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
फागुनको दोस्रो साता अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा कालोसूचीबाट फुकुवा भएको पाँच वर्ष पूरा भएपछिमात्र सहकारीको सञ्चालक बन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।
समितिले सहकारी संस्थामा संस्थागत सुशासन कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै संस्थाको सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्नका लागि न्यूनतम योग्यता तोक्नसमेत सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा महानगरपालिकामा भएको जिल्लामा कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कुल सञ्चालकहरूमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत सञ्चालक स्नातक उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने, उपनगरपालिका भएको जिल्लामा कारोबार गर्ने संस्थामा कुल सञ्चालकहरूमध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत स्नातक उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने र नगरपालिका भएका जिल्लामा कारोबार गर्ने संस्थाको सञ्चालकहरूमध्ये कम्तीमा २ जना स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति हुने व्यक्तिले पनि स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तैगरी कार्यकारी प्रमुख हुने व्यक्ति कालोसूचीमा समावेश नभएको वा त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको तीन वर्ष पुगेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सहरी क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा समस्या आएपछि उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिले सुझाव दिन समिति गठन गरेको हो । समितिले सहरी क्षेत्रमा बचत ऋण कारोबारलाई अंकुश लगाउन विविध सुझाव दिएको छ । हाल सहकारीका करिब २ खर्ब रुपैयाँ कारोबार भइरहेको अनुमान गरिएको छ ।
Posted by Yadav Humagain at 8:13 AM
सहकारीमा निक्षेप सिमा ३० लाख
काठमाडौं, ४ चैत - सरकारले सहकारीको कारोबारमा अंकुश लगाउने भएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीमा बैंकसरह ठूलो निक्षेप संकलन हुन थालेपछि सरकारले गठन गरेको एक समितिले निक्षेपको सीमा तोक्न सुझाव दिएको छ । समितिले एक व्यक्तिले ३० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै निक्षेप संकलन गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण सहकारीमा कारोबार बढेको र कालोधन लुकाउने ठाउँ बनेका कारण सीमा तोक्न सिफारिस गरिएको समितिका एक सदस्यले बताए । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरेको प्रतिवदेनले यस्तो सीमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । सहकारी मध्यम र गरिब जनताका लागि मात्र भएकाले करोडौं बचत गर्न नपाइने ठहर समितिको छ ।
पाँच सदस्यीय समितिमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शनप्रसाद ढकाल, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने, राष्ट्रिय सहकारी संघका उपाध्यक्ष विजयराज घिमिरे र राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक चेतप्रसाद उपे्रती सदस्य थिए ।
समितिले सहकारी संस्थाको बचत तथा ऋण लगानीको ब्याजदरमा समेत सीमा लगाउन सुझाव दिएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा बढी ब्याज दिएर सर्वसाधारण आकर्षित गरेको र बढी ब्याजको लोभले निक्षेप राख्ने र जोखिममा पर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ब्याजदर नियन्त्रणका लागि निक्षेपको ब्याज र कर्जाको ब्याजअन्तर (स्प्रेडदर) घटाउन समयसीमा निर्धारण गरी विभागले कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । यसैगरी सहकारीले सदस्यहरूबाट सेवा शुल्क उठाउने कामलाई पनि तत्कालै रोक लगाउन सुझाव दिइएको छ ।
सहरी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गरेका सहकारीले निक्षेप र कर्जामा दोब्बर ब्याज दिँदै आएका छन् । विज्ञापन गरी ब्याजदर प्रचार गर्ने, आकर्षक उपहारको लोभ देखाउने र होर्डिङबोर्ड तथा साइनबोर्डलाई समेत नियन्त्रण गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
फागुन दोस्रो साता अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा सहरी क्षेत्रमा बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता तत्कालै बन्द गर्न र मर्जर अभियान सञ्चालन गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा ५० करोडभन्दा माथि कारोबार भएका संस्थाको राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले सघन अनुगमन निरीक्षण गरी गम्भीर त्रुटि भेटिएका सहकारीमा पूर्वसावधानी अपनाउनुपर्ने र ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको छड्के अनुगमन गरी समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
सहरी क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा समस्या बढ्न थालेपछि सरकारले समाधानको सुझाव दिन समिति गठन गरेको हो । समितिले सहकारीले घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न र भएको लगानी निश्चित सीमाभित्र फिर्ताको व्यवस्था मिलाउन, संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकको योग्यता तोक्न, सहकारी संघहरूलाई परिचालन गरी अनुगमन गर्नलगायतका सिफारिस गरेको छ ।
देशभर हाल २७ हजार सहकारी संस्था दर्ता छन् । तीमध्ये ४ हजार बहुद्देश्यीय र १२ हजार बचत तथा ऋण सहकारीले १ खर्ब ५० अर्ब निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ४१ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
Posted by Yadav Humagain at 8:10 AM
सीमित व्यक्तिको चलखेलले सहकारी धराशायी : डेपुटी गभर्नर
काठमाडौं, २२ फागुन - नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहरी क्षेत्रका केही सहकारीका सञ्चालकहरूले सदस्यको निक्षेप आफू खुसी प्रयोग गर्ने र कुम्ल्याएर हिँड्ने प्रवृत्ति बढेकाले सिंगो सहकारी क्षेत्र नै धराशायी बन्दै गएको बताएका छन् ।
मंगलबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले गरेको ‘वित्तीय सहकारीका समस्या र समाधान’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नर अधिकारीले सहकारीमा अनेक प्रलोभन पारेर सर्वसाधारणबाट पैसा जम्मा गर्ने र भाग्ने नै सहकारीको ठूलो समस्या बनेको उल्लेख गरे ।
समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलको संयोजकसमेत रहेका अधिकारीले सहकारीविरुद्ध परेका २२ वटा उजुरीमाथि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । “कस्ता सहकारीलाई समस्याग्रस्त भन्नेबारे हामीसँग आधार छैन,” उनले भने, “समस्यामा परेका र नपरेका ठूला सहकारीको वित्तीय विवरण मगाएर अध्ययन गरिरहेका छौं ।” समस्याग्रस्त संस्थाको बैंकमा रहेको मौज्दात, सम्पत्ति, लगानीको मूल्यांकन गरेर सदस्यलाई पैसा फिर्ता गर्न सुझाव दिइने उनले बताए ।
सहकारी निजी क्षेत्रका बैंक वित्तीय संस्थाभन्दा फरक सिद्धान्त भएकाले सहकारीमा समस्या देखा पर्दा सामान्य रूपमा हेर्न नहुने उनको सुझाव थियो । “सिद्धान्तः सहकारी स्वनियममा बस्ने हो, तर नबस्नेलाई अनुगमन र नियन्त्रण पनि आवश्यक हुन्छ,” उनले भने ।
सहकारी र लघुवित्तको काम गर्ने संस्थालाई अनुगमन गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अधिकारी त्यसका लागि ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिए । सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न नमिल्ने र आवश्यक परेका अनुगमनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने उनले बताए ।
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले ब्याजको लोभमा सहकारीमा निक्षेप जम्मा गर्ने प्रवृति रहेकाले बढी ब्याज र प्रचार–प्रसारलाई निरुत्साहित गर्न लागिपरेको बताए । राष्ट्र बैंक र विभागबीच समन्वय नहुन सहकारीमार्फत घरजग्गामा लगानी बढेको र यसले सहकारीलाई समस्या भएको उनले दाबी गरे ।
“राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा लगानी कडाइ गरेपछि सहकारीबाट लगानी भएकाले समस्या बढ्यो,” न्यौपानले भने, “वित्तीय क्षेत्रसँग समन्धित निर्देशन जारी गर्दा राष्ट्र बैंक र विभागको समन्वय आवश्यक छ ।”
विभागसँग सहकारी संस्थालाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएको भन्दै न्यौपानेले संस्थाका सदस्यलाई नै सचेत हुन आग्रह गरे । “गल्ती काम गर्ने सहकारीलाई हामी सचेत गराउने, सुधार गर्न समय सीमा दिनेबाहेक केही गर्न सक्दैनौं,” उनले भने । सहकारीमा सञ्चालक कार्यकारी हँुदा पनि संस्थाको रकम दुरुपयोग गरेको पाइएकाले त्यसलाई निषेध गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
नेपाल बहुद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले सीमित सहकारीको समस्या देखाएर केही बैंकरहरू सहकारी सिध्याउन लागेको आरोप लगाए । सरकारले मात्र सबै सहकारीको नियमन गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्दै भण्डारीले सहकारीका केन्द्रीय संघहरूलाई परिचालन गरेर अघि बढेमात्र समस्या समाधन बताए । यसअघि अनुगमन गरेको प्रतिवेदन लुकाएकाले अहिले सहकारीमा समस्या आएको उनको भनाइ थियो । “दुई वर्षअघि नै अनुगमन गर्दा केही सहकारीको सतप्रतिशत घरजग्गामा लगानी भएको भेटिएको थियो, उनले भने, “त्यस्तो अवस्थामा सहकारी विभाग किन चुप लागेर बस्यो ।”
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केवी उप्रेतीले सहकारी शिक्षा र तालिम व्यापकता दिन सकेमात्र सहकारीमा विकृति घट्ने बताए । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकारी आन्दोलनबाट पनि लागिपरेको जानकारी दिँदै तरलताको समस्या रहेका संस्थालाई बैंकले सहयोग समेत गरिरहेको बताए ।
Posted by Yadav Humagain at 8:02 AM
राष्ट्र बैंक किन मौन छ ?
अध्यक्ष, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ
वर्षौं पुरानो ऐन–कानुन र प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा च्याउसरि खुलेका सहकारी संस्थामा विकृति मौलाउँदो छ । सबल व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासन नहँुदा केही सहकारीमा समस्या भएको नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी बताउँछन् । सञ्चालक नहेरी सहकारी भटाभट संस्था दर्ता गर्ने तर अनुगमन नगर्ने सरकारको प्रवृत्तिको विरोध गर्दै उनले २६ हजार संस्थाको सरकारले अनुगमन गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे । विषयगत, जिल्ला, केन्द्रीय र राष्ट्रिय संघहरूले आफूमातहतका सहकारीलाई अनुगमन गरेमात्र व्यवस्थित हुने उनको भनाइ थियो । श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका भण्डारीले बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघमार्फत नमुना सहकारी आन्दोलनको सुरु गर्ने र सहकारीलाई शुद्धीकरण गर्दै उत्पादन र गरिबी निवारणसँग जोड्ने योजना सुनाए ।
सहकारीले सदस्यको बचत फिर्ता नदिएको, सञ्चालकहरू रकम लिएर भागेको, संस्थाहरू धराशायी भएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । सहकारीमा विकृति बढ्नुका कारण के हुन् ?
सबल व्यवस्थापनको अभावमा केही ठूला तथा साना सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको छ । संस्थागत सुशासन नहुँदा पनि संस्थाहरू जोखिममा परेका हुन् । सरकारी निकाय सहकारी विभागले समयमै अनुगमन गरी निर्देशन दिनुपर्नेमा उसको भूमिका कमजोर हुँदा विकृति बढेको हो । यद्यपि अहिले समस्यामा परेका सहकारीको अध्ययन गर्न डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा सरकारले समितिसमेत बनाइसकेको छ । समितिमा सेयर सदस्यलाई कसरी रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफलसमेत भइरहेको छ ।
ठूलो क्षेत्र र धेरै संस्था भएकाले समस्याहरू आउँछन्, त्यसलाई समाधान पनि गर्दै जानुपर्छ । तर, समग्र वित्तीय क्षेत्रमा समस्या हुँदा सहकारीको विषयलाई मात्र उचालिएको छ । यसमा हामीलाई चित्त दुखेको छ । ११ वटा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फसेको छ, यसबारे राष्ट्र बैंक किन मौन छ ?
सहकारीमा पटक–पटक समस्या दोहोरिएका छन् नी !
सैद्धान्तिक रूपले सहकारी सदस्यहरूले नै नीति–नियम बनाएर सञ्चालन गर्ने, स्वनियमनमा बस्ने संस्था हो । त्यो हुँदाहँुदै पनि व्यावहारिक रूपमा कस्तो व्यक्तिले कुन मोडलको सहकारी खोल्ने, वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको पुँजी कति छ, कस्तो खालको व्यक्ति हो, उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण नबुझीकन अनुपमतिपत्र मात्र फटाफट दिने प्रवृत्ति र त्यसपछि संस्थाले नियमित रूपमा साधारणसभा, लेखापरीक्षण भए÷नभएको, नाफा कमाउन सकेको छ कि छैन, लगानी कस्तो क्षेत्रमा गरिरहेको छ भन्ने विषयमा निरिक्षण गर्ने निकाय नभएका कारणले समस्या आएको हो । सहकारी भनेको के हो भन्ने विषयमा हाम्रा जनता शिक्षित हुनुहुन्न । यसबारेमा राज्यको पनि कमजोरी छ । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ऐन–कानुनमा सुधार, सहकारी शिक्षा र अनुगमनलाई बढाउनुपर्छ ।
सरकारीमा सरकारी स्तरबाट नियमित अनुगमन निरिक्षण हुन सकेको छैन । सरकार आफैंले २६ हजार सहकारी संस्थाको अनुगमन सम्भव छैन । त्यसैले समन्धित विषयगत संघ, जिल्ला संघ र केन्द्रीय संघहरूलाई आफूमातहतका संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मा दिनुपर्छ । विभागले समयमा समयमा संघहरूसँग विवरण लिएर अनुगमनको समीक्षा गर्ने, त्यसैको राय–सुझावका आधारमा थप निरिक्षण गर्न सक्छ ।
सहकारी ऐन–कानुन कमजोर हुँदा समस्या बढेको हो ?
पक्कै पनि हो, सञ्चालकले आफ्नो १ लाख रुपैयाँ पुँजी राखेर सदस्यको २ अर्ब रुपैयाँ संकटमा पारेको छ । त्यसका लागि कानुन परिमार्जन गरी जसले गल्ती गर्छ उसलाई कानुनी दायरमा ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
सरकारी निकायबाट सहरी क्षेत्रमा सहकारीको दर्ता बन्द गर्ने र मर्जर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा आएको छ, यसबारे यहाँहरूको धारणा के छ ?
प्रजातान्त्रिक देशमा संघसंस्थाको दर्ता बन्द गर्ने कुरा लामो सयमसम्मका लागि उपयुक्त नहोला । तर, मर्जर अभियान सञ्चालन गर्ने कुरा त उपयुक्त हो । कसैले आफ्नो खुसीले चाहन्छ भने मर्जर गर्नुप¥यो । नयाँ संस्थाको दर्ता बन्द गर्नुभन्दा दर्ताको प्रक्रिया दह्रो बनाउन सकिन्छ । कसैले संस्था बनाएर हामी केही गरेर देखाउँछौ भनेर लाग्छ भने त्यसमा रोक्नुहुन्न ।
सहकारीका कारण केही महिनादेखि बंैकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव देखिएको भनिन्छ नि !
एक वर्षअघि तरलता बढी भयो भनेर बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतसम्म झारे । अहिले पछिल्लो चरणमा दुई–तीन वटा बैंकबाहेकमा तरलतामा समस्या आएको र ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अत्यन्तै अदूरदर्शी निर्णय छ । किनभने १२ प्रतिशतको ब्याजदरलाई ३ प्रतिशतमा झार्दा राष्ट्रबैंकले हस्तक्षेप गरेन । अहिले तीन वर्षअघि जस्तै बैंकका म्यानेजरहरू निक्षेपका लागि सहकारीमा लाइन बस्ने अवस्था आइसकेको छ । सहकारीमा निक्षेप बढेर तरलताको अभाव भएको होइन, देशको व्यापार घाटाको कारण यस्तो भएको हो । बरु सहकारीले बैंकका लागि कलेक्टरको काम गरेको छ । सहकारीले संकलन गरेको स–सानो रकम अन्ततः बैकमै जाने हो । यो कुरा बैंकर र राष्ट्र बैंकले बुझ्नु जरुरी छ ।
ब्याजका कारण बैंकका निक्षेपकर्ता सहकारीतिर तानिएका हुन् ?
बैंकबाट निक्षेप झिकेर सहकारीमा, सहकारीबाट बैंकमा जाने क्रम त चलि नै रहन्छ । अन्ततोगत्वा त्यो रकम जाने त बैंकमै हो । लालिगुराँस सहकारीले मात्र ५२ करोड तरलता १२÷१३ वटा बैंकमा राखेको छ । सर्वसाधारणले ल्याएर सहकारीमा राख्छन्, हामीले बैंकमा राख्छौं । बैंकले जस्तै आफ्नो या राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा त थन्क्याउँदैनांै नि !
गत वर्ष अनुगमनमा सहकारी संस्था आफैंले सेफमा रकम राखेको पनि भेटियो नी !
बिमा नगरी भल्टमा धेरै रकम राख्नु नराम्रो हो । कुनै संस्थाले त्यस्तो गरेको भए कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अहिले जोखिम बढी भएकाले आफैं रकम राखेको पाइँदैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटे पनि सहकारीको ब्याजदर नघट्नुको कारण के हो ?
सहकारीका साथीहरूले यो देशको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढिरहेको छ, नबुझ्दा ब्याजदर समायोजन हुन नसकेको हो । बैंकहरूले एकवर्षे मुद्दती खातामा ७÷८ प्रतिशत ब्याज दिँदा कतिपय संस्थाले १८÷२० प्रतिशत ब्याज दिइरहेका थिए । संस्था चलाउने व्यवस्थापक वा कार्यकारी पद लिएको व्यक्तिहरूले वित्तीय क्षेत्रको ब्याज बढ्दा बढाउनुपर्ने र घट्दा घटाउनुपर्ने कुरा बुझ्नुप¥यो ।
हामीले बढी ब्याज दिएका संस्थालाई डिभिजन सहकारी कार्यालय र जिल्ला संघमार्फत अनुगमन गरी भोलि समस्या आउँछ है भनेर सचेत गराइरहेका छौं । बुझ्ने सर्वसाधारणहरु यस्तो परिस्थितिमा पनि किन यति धेरै ब्याज दिइरहेको छ भनेर सचेत हुनुहुन्छ । यो कुरा विचार नपु¥याउँदा भविष्यमा अप्ठेरो पर्न सक्छ ।
निक्षेप बैंकतिर जान्छ भनेर ब्याज नघटाएको हो कि !
निक्षेप बाहिरिन्छ भनेर होइन । केही संस्थाका सञ्चालकले नबुझेर ब्याजदर नघटेको हो । बैंकले झैं हामीले पनि तलमाथि गरिरहेका छौं । गत वर्ष बचतमा १२ प्रतिशत ब्याज दिएका थियौं भने अहिले ८ प्रतिशतमा झारेका छौं । अस्वाभाविक ब्याज दिने संस्थाप्रति सदस्य चनाखो हुनुपर्छ ।
कर्जाको ब्याजदर बढी छ नि !
वित्तीय सहकारीको ब्याजदर अन्य वित्तीय संस्थाको तुलनामा बढी हुनु स्वाभाविक हो । तर, कतिपय संस्थाले २०÷२२ प्रतिशत पनि लिएको पाइन्छ । बढी ब्याज दिने र लिने दुवै प्रकारका संस्थालाई माथिबाट अलिकति नियन्त्रण हुन जरुरी छ ।
तपाई बहुउद्देश्यीय सहकारी संघको नेतृत्वमा पनि हुनुहुन्छ, संस्थाको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ । बहुउद्देश्यीय सहकारी पनि वित्तीय कारोबारमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप छ नि !
बहुउदेश्यीय संस्था भनेको धेरै क्षेत्रमा जानलाई खुला बाटो हो, तर अहिलेको सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड त्यसका लागि बाधक छ । यो मापदण्ड बनाउने बेला म पनि समितिमा थिए । मापदण्डमा उल्लेख भएको निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने र भएको लगानी पनि फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था नराख्न धेरै प्रतिवाद गरे । मापदण्डले अहिले नयाँ लगानी भन्दा पनि पहिला गरेको लगानी पनि फिर्ता गर भन्छ । त्यसैले बहुउद्देश्यीय सहकारीको लगानी अन्य क्षेत्रमा जानलाई ऐन कानुनको बाधालाई हटाउनुपर्छ र बहुउद्देश्य नामअनुसार नचलेका सहकारीलाई घचघच्याउनुपर्छ, चलेनन् भने मापदण्डअनुसार एकल उद्देश्यमा लैजान सकिन्छ ।
निजी क्षेत्रमा नगई सहकारी आफैंले अस्पताल, विद्यालय, उद्योग चलाउन सक्दैन र !
खर्च बढी हुने र लामो समयपछि मात्र नाफा आउने भएकाले धेरैवटा संस्था मिलेर मात्र दीर्घकालीन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । एउटाले मात्र लगानी गर्दा संस्थालाई असर पर्न सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रसँग मिलेर पुँजीकोषका आधारमा पशुपालन, डेरी प्रोजेक्ट आदिमा लगानी गर्न सरकारले नीतिगत रूपमै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सरकारले निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था समेत गर्न सक्छ ।
सहकारीमा विकृति बढेका बेला केन्द्रीय संघहरूको भूमिका कमजोर देखियो भन्ने सहकारीकर्मीको गुनासो छ, यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
हामीकहाँको मुख्य समस्या भनेको संघहरूको नेतृत्वमा रहेका अधिकांश साथीको आफ्नो संस्था छैन । त्यसकारण उनीहरूले समस्यामा परेका संस्थाको पीडा बुझ्न सकेनन् । सहकारी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने केन्द्रीय निकाय राष्ट्रिय सहकारी संघमा राजनीति धेरै हावी छ । राजनीति भागबन्डा गरेर तीनवटा पार्टीका व्यक्तिले कुर्सी लिनुभयो । हामी त्यसको विरोधी हौं । देशको समग्र २६ हजार सहकारीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्छ । जसले सहकारीभित्र आएर पार्टीको राजनीति नगरोस् । केही केन्द्रीय र जिल्ला संघहरू झोलामा छन् । व्यक्तिले त्यसलाई प्रयोग गर्ने भएकाले नेपालको सहकारी आन्दोलनले दुःख पाएको हो ।
यो समयमा संघहरूको भूमिका कस्तो हुनुपथ्र्यो ?
अहिले हामीले हेर्दा एक दर्जनजति सहकारीमा समस्या आए पनि ठूला चारवटामा मात्र समस्या आएको हो । ओरेन्टल, गुण, एक्जिम र शुभश्रीमा समस्या आएकाले हाम्रो संघ दर्ताको प्रक्रियामै हुँदै मैले यी संस्थालाई बचाउन धेरै दौडधूप गरे । यो कुरा राष्ट्रिय संघमा राखे पनि उहाँहरूले यो कुरा बुझ्नुभएन । उहाँहरूको आफ्नो संस्था भए पो सदस्यहरू लाइन लाग्दा, घेराउ गर्दाको पीडा बुझ्नुहुन्थ्यो । तत्कालीन रजिस्टार सुदर्शन ढकाललाई पनि जसले धेरै घरजग्गा र हाउजिङमा लगानी गरेको छ उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्, नत्र संस्था समस्यामा परी सहकारी आन्दोलनमै दाग लाग्न सक्छ भन्दा नियन्त्रणका लागि संयन्त्र छैन, प्रयास गरिरहेका छौं भन्नुभयो । सबैको बेवास्ताले आखिरमा समस्या बढ्यो ।
अब भविष्यमा त्यस्तो घटना नघटोस् भनेर विषयगत जिल्ला, केन्द्रीय र राष्ट्रिय संघले कोर कमिटी बनाएर गए मात्र समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । सरकारले मात्र गर्न केही गर्न सक्दैन ।
केही संस्थाहरू तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि समस्यामा परे, यसमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको भूमिका कस्तो रह्यो ?
सहकारी बैंको पुँजी भर्खरै २५ करोड पुग्यो । राष्ट्रिय बैंक बन्न २ अर्ब पुँजी नभई हँुदैन । सीमित बैंकिङ कारोबारको अनुमति पाएको सहकारी बैंकले समस्यामा परेका सहकारीलाई सहयोग गरेन । बैंकहरूको अन्तर बैंक कारोबारजस्तै अन्तर सहकारीको सम्बन्धलाई अझ बढाउनुपर्छ । पैसा लिन एकैपटक सबै सदस्यको लाइन लाग्यो भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र नविलले पनि पैसा दिन सक्दैन । यो सबैले बुझेको कुरा हो ।
बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ दर्ता भएपछि सेलायो भन्ने सहकारीकर्मीको गुनासो छ नि !
ठूलो सघर्षबाट संघको जन्म भएको छ । हामी भित्री रूपमा बैठक गरिरहेका छौं । कार्यालय बन्दैछ । आगामी २९ गते हुने प्रारम्भिक साधारणसभाले हालको तदर्थ समितिलाई पाँच वर्ष काम गर्ने अनुमति दिएपछि हामी कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्छौं ।
के छन् संघका भावी योजना ?
सर्वप्रथम त ६४ जिल्लामै जिल्ला संघ गठन र ४ हजार ३ सय बहुउद्देश्यीय संस्थाको वास्तविक स्थिति संकलन गर्छौं । त्यसपछि संस्थाको सुदृढीकरण गरी बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई उत्पादन र गरिबीसँग जोड्ने दिशामा अघि बढ्छौ । संघबाट हामी नमुना सहकारी आन्दोलनको विकास गछौं ।
बहुउद्देश्यीय संस्थाको दर्ता त बन्द छ नि !
केन्द्रीय संघ दर्ता भएपछि प्रारम्भिक संस्था दर्ता बन्द गर्नुमा कुनै तुक छैन । डिभिजन कार्यालयले दर्ता बन्द छ भनेर हल्ला फिँजाएर भित्रभित्र संस्था दर्ता गरिरहेको छ । यसबारे हामी सबैलाई सुुसूचित गछौं । सहकारी मन्त्रालयका सचिवले पनि रजिस्टारलाई दर्ता बन्द नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
Posted by Yadav Humagain at 8:37 AM
दिगो आर्थिक विकास गर्न सहकारी
राष्ट्रिय सहकारी नीति–२०६९
काठमाडौं, २९ फागुन – सरकारले दिगो आर्थिक विकासका लागि सबै क्षेत्रमा सहकारी पद्धतिको विस्तार गर्ने भएको छ । शुक्रबारबाट लागू भएको ‘राष्ट्रिय सहकारी नीति–२०६९’ ले स्थानीय श्रम, सीप र पुँजीलाई परिचालन गर्ने सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक सबल स्तम्भको रूपमा विकास गर्ने उद्घोष गरेको हो ।
नीतिले निश्चित ठाउँहरूमा सहकारी संस्था दर्तामा रोक लगाउनुका साथै सहकारीहरूलाई मर्जरमा जानसमेत उत्प्रेरित गरेको छ ।
नीतिमा सहकारीको वित्तीय सेवाका साथसाथै अहिलेसम्म सहकारीको उपस्थिति नरहेका क्षेत्रहरू घरजग्गा तथा हाउजिङको विकास, बिमा, विद्यालय, पर्यटन व्यवसायमा समेत विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सहकारीमार्फत कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, वितरण, बजारीकरण तथा कृषि सामग्रीको आपूर्ति, पशुपालन तथा पशुजन्य उद्योग, वनजन्य उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगका साथै वातावरण संरक्षणसम्बन्धी उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उद्योग, श्रमिक स्वामित्वका उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, प्रशारण र वितरण, खुद्रा तथा थोक पसल सञ्चालन, जडिबुटी खेती, प्रशोधन र बजारीकरण, सीपमूलक घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नीतिले कृषि क्षेत्रलगायत अन्य उत्पादन तथा सेवामा आधारित सबै प्रकारका व्यवसायमा सहकारीलाई क्रियाशील गर्ने, महिला, गरिब, सीमान्तकृत, अपांग, भूमिहीन तथा पिछडिएका वर्ग र श्रमिकहरूका साथै आम नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहकारीको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसैगरी सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि सहकारीकै केन्द्रीय संघलाई परिचालन गर्ने र त्यसका लागि राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सहकारीलाई कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गरी अनुगमन गर्ने र सहकारीमा निक्षेप सुरक्षण र कर्जा सूचना केन्द्रको काम सुरु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी नीतिमा सरकार, सहकारी, निजीक्षेत्र तथा विकास साझेदारहरूबीच सहकार्य र सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने तथा सहकारीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनका लागि दीर्घकालीन योजना, मानव संसाधन विकास, आवश्यक संगठन संरचनाहरूको निर्माण एवं कानुनी व्यवस्थाहरू गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
हाल देभभर करिब २७ हजार सहकारी छन् । त्यसमा ३८ लाखभन्दा बढी आबद्ध रहेकामा महिलाको सहभागिता ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ । सहकारीहरूको कुल सेयर पुँजी २७ अर्ब रुपैयाँ, बचत १ खर्ब ४० अर्ब र लगानी १ खर्ब ३४ अर्ब छ । देशको कुल वित्तीय कारोबारमा सहकारीले १५ प्रतिशतको हिस्सा ओगटेको छ । सहकारी संघसंस्थाहरूमा ५० हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूले प्रत्यक्ष र करिब ५ लाखभन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय ‘राष्ट्रिय सहकारी नीति निर्देशन समिति’ समेत रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा मन्त्रालयको राज्यमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ, उद्योग, ऊर्जा, कृषि विकास, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण, वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्रम तथा रोजगार, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा, सहकारी र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार, राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष र सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने उल्लेख छ ।
नेपालमा औपचारिक रूपमा सहकारीको विकास ५६ वर्ष कट्दा पहिलोपटक सहकारी नीति आएको हो । सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शनप्रसाद ढकालले नीति ऐतिहासिक भएको र यसको कार्यान्वयन भए सहकारी विकासमा कोशेढुंगा हुने दाबी गरे । तर, सहकारीका ऐन नियमहरूको परिमार्जन तथा नयाँ कानुनहरूको निर्माण गर्न नसके सहकारी नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।
दीर्घकालीन रणनीतिको तयारी
काठमाडौं, २९ फागुन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाउने भएको छ । नेपाल बहुद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघको साधारणसभा उद्घाटन गर्दै सहकारी मन्त्री एकनाथ ढकालले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा सहकारीको भूमिका बढाउन रणनीति बनाउन लागिएको जानकारी दिए ।
अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिकालाई बढाउनका लागि ऐन कानुनअनुसार सहकारी संस्था पारदर्शी ढंगले चल्नुपर्ने ढकालको भनाइ थियो । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले सहकारीले गुणात्मक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । “सहकारीको संख्या बढी हँुदैमा विकास भएको मानिँदैन” उनले भने, “अब सहकारी उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुपर्छ ।”
साधारणसभामा संघको दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले १ खर्बभन्दा बढी पुँजी संकलन गरेर नमुना कृषि परियोजना तथा नमुना पशुपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए । त्यस्तै बहुद्देश्यीय संघको नेतृत्वमा सहकारी संस्था र निजी क्षेत्रको सहभागितामा साना तथा मझौला जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र सहकारीमार्फत महिला तथा युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने परियोजना ल्याउने जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी संघका निवर्तमान अध्यक्ष दीपकप्रकाश बाँस्कोटाले सबै सहकारीलाई कृषिमा लगानी गर्न प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।
देशभर सञ्चालित ४ हजार ३ सय बहुद्देश्यीय सहकारीले करिब ६२ अर्बभन्दा बढीको निक्षेप परिचालन सोहीबराबरको कर्जा लगानी गरेका छन् भने ३० हजारभन्दा बढीले रोजगार पाएको संघले जनाएको छ ।
Posted by Yadav Humagain at 8:29 AM